प्रशान एलुङ रार्इ
केहि दिन बित्यो यताको मदर्स डे र उताको आमाको मुख हेर्ने दिन । खै, हामी त पृथ्वीको ठीक उल्टो भूगोलमा ओतिएका छौ । बाबाले भनेजस्तै घामको जरा निस्कने पातालको कत्रिट शहरमा म पनि हाम्रै घरआँगनको माटो सुँघेर बसेको छु । तिम्रो मजेत्रो र बर्कोको सुगन्ध यो पल मैले खुव याद गरेको छु । तिमी चाहिँ उता पहाडको कुन बारको डल्ला फोर्दैछौ कुन्नि ? कि चौतारीको डिलमा बसेर मूलबाटो हेर्दैछौ ?
यहाँ आफूसँगै आमा हुने धेरै सखीहरूले आफ्ना आमालार्इ मिष्ठान्न भोजनसँगै पुष्पगुच्छा दिए । टाढा भएकाहरूले चाहिँ फेसबुक र ट्युटरबा भित्ताहरूमा आमाबा तस्वीर टाँसेर आदरभाव चढाए । बैशाखको याम छ, सायद तिमीले पनि एक थुंगा गुराँस टिपेर घरको दैलोमा चढायौ । किनकि तिम्रा छोराहरलार्इ रातो गुराँस मनपर्छ । खै, मिष्ठान्न भोजन त के खायौ होली र ? अगेनामा जे उम्लिन्छ सन्तोष मानेर खान्छयौ त्यही तिम्रो चौरासी व्यञ्जन । यता म चाहिँ छोरी एलिनाले स्केच गरेको तिम्रो आकृति नियालेर बसे । अमूर्त स्केच र तिम्रो मूर्त आकृति दाँजेर खुव हेरे । चाउरी परेका अनुहार अनि सेताम्मे कपाल । कति सुन्दर चेहरा ? उस्तै अलौकिक मुस्कान । त्यस्तै उज्यालो आशा । तिम्रो मूर्त/अमूर्त आकृतिमा भेटेको समानता यिनै हुन् । तिमि साँच्चै हाम्रो घरको झ्यालबाट देखिने आमादव्लम हौ । अनि त तिमी हिमाल हौ । हाम्रा लागि सधै पग्लिरह्यौ...पग्लिरहेछौ...पग्लिरहनेछौ ।
तिमी आफू पग्लेर हामीलार्इ निरन्तर सिञ्चित बनाउदै हराभरा बनायौ । हामी भने सुदूर भविष्यको बहानामा प्रवास आँट्यौ । सायद तिमीले कहिल्यै बाँडेनौ आमा हुनुका पीडा । केवल गर्वले छाती पिट्यौ । अनि त सुनसान घरको भित्ताहरूमा झुण्डिएको फोटाहरूमा कहिले रातो गुराँस सिउरिउँछौ त कहिले पहेँलो जमरा । यता परदेशमा क्याक्टस् उमार्छौ, सिउँडि फुलाउँछौ । साँच्चै हामी कति स्वार्थी ? कति नजाति ?
साँच्ची ! अब त हाम्रो गाउँको आकाशमा हुल बाधेर कर्याङ्कुरूङ उड्ने बेला आयो । गर्मी छल्न साइवेरियाको तट छिचोल्दै उड्ने चराहरूले पनि सुरक्षाकै निम्ति त हाम्रो आकाश रोजेका होलान् । विदेशी चराहरूलार्इ त हाम्रो आकाश सुरक्षित लाग्छ भने हामीलार्इ हाम्रो पहाड, हाम्रो माटो कित भरपर्दो लाग्छ कति । वास्तविकता यही त हो आमा । यहाँ त थाहा नै हुन्न म उभिएको आकाशमाथि कुन आतङ्ककारी आत्मघाती जहाज उडाएर अमेरिका ताक्दैछ भनेर । कुनै खुसियालीको माहोलमा साम्राज्यवादको विरोध गर्दै कसले झोलामा बम बिस्कुनझै सुकाएर जान्छ पत्तै हुन्न यहाँ । उता ठूल्दाइ बसेको ठूलो बेलायतमा पनि कहाँ सरल छ र जिन्दगी ? विश्व युद्धको धङ्धङी छ जसलार्इ पनि । कति बेला दाजुलार्इ अफगान पठाउँछ ? ठेगना छैन । हाम्रा पूर्वजहरूको बीरता र इतिहासको व्याज बल्लतल्ल त बाँड्दैछ बेलायत सरकार । मध्यपूर्वमा नि निर्धक्क छैन जिन्दगी । अस्ति मात्रै त हो मलायमा मलेहरूले नेपालीहरूमाथि त्यत्रो रडाको मच्चाएको । धन्न माइला दाइ फरक होस्तेलमा बस्दा रहेछन् ।
कतैको आकाश सुरक्षित छैन त कतैको धर्ती कमजोर छ । कतैको आकाशमा आणविक अस्त्र परीक्षण गर्छन त कतैको धर्ती सुनामीले बगाउँछ । यसो घोत्लिदा त हाम्रै आकाश सुरक्षित रहेछ नि हगि आमा ? हाम्रै पहाड बलियो रहेछ ।
बलियो पहाडका उर्जाशील ग्रहहरूमा निर्धक्कको जीवन बाँचेको मेरी आमालार्इ मैले नि भन्नु छ- "आमा ! ह्याप्पी मदर्स डे ।"
Date: 10/1/2013 8:56:38 अपराह्न : : Yam Thapa